MMC IT အသင်း - ♥ မြန်မာချစ်သူမိသားစု ♥
All Groupsသင်၏အဖွဲ့ များ Admin
MMC IT အသင်း
အမည်မသိ မှ တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်
မြန်မာချစ်သူများ မှ အသင်းဝင်များအတွက် IT နည်း
Latest Activity:5hours ago မျှဝေမယ် Twitter
Water effect နဲ့ ပုံပြောင်းနည်းလေးပါ
Started by မိုးလုံးပြည့်လျှံ. Last reply by မယ်မဒီလွင်5hours ago. Wi-Fi လွှင့်နည်းများ
Started by ရဲဂျာ. Last reply by ♥ ♫*♥* ညီမင်းစံ *♥*♫ ♥ Jan 29. Hacking စိတ်ဝင်စားသူများအတွက် USB thief 5.4
Started by ရဲဂျာ. Last reply by Hein Zaw Oct 11, 2012. Admin
သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် နာမည်နဲ့ Logo လေးတွေလုပ်ရအောင်
Started by အမည်မသိ. Last reply by ♥ ♫*♥* ညီမင်းစံ *♥*♫ ♥ Sep 30, 2012. မိမိပို့ လိုက်တဲ့ Email ကို လက်ခံတဲ့သူကဖတ်မဖတ်
Started by ရဲဂျာ. Last reply by ♥ ♫*♥* ညီမင်းစံ *♥*♫ ♥ Sep 30, 2012. နေ.စဉ် ကွန်ပျူတာ သုံးနေသူများ အတွက်
Started by မိုးလုံးပြည့်လျှံ. Last reply by ♥ ♫*♥* ညီမင်းစံ *♥*♫ ♥ Sep 30, 2012. Admin
Removable Disk Icon ပြောင်းကြမယ်
Started by အမည်မသိ. Last reply by Hein Zaw Sep 28, 2012. အိုင်တီ သမားတစ်ယောက် ရှိသင့်သည့် ကိုယ်ကျင့်တရားများ
Started by ရဲဂျာ. Last reply by Zin N@ing Jun 21, 2012. ကူညီကြပါ...။
Started by မောင်မင်းသုဇင်. Last reply by မောင်မင်းသုဇင် Jun 4, 2012. Admin
Started by အမည်မသိ. Last reply by မောင်မင်းသုဇင် Jun 2, 2012. ကွန်ပြူတာ သမားများ အမြင်အာရုံ မထိခိုက်စေဖို့
Started by ရဲဂျာ. Last reply by နန်းအိရတနာမောင် May 24, 2012. Virus ကို မြင်အောင် ကြည့်မယ်
Started by ♥♥♥ကိုဖြိုး♥♥♥. Last reply by su lay May 8, 2012. Windows7ကို လျင်မြန်စွာအသုံးပြုနိုင်မည့်အချက်များ
Started by ရဲဂျာ. Last reply by su lay Apr 26, 2012. Window မှာ မမြင်ရတဲ့ Floder တခုလုပ်ရအောင်
Started by ရဲဂျာ. Last reply by +++m0E hTet @hK@r Apr 26, 2012. Scratch လို့် ခေါ်တယ်....စိတ်ဝင်စား ဖွယ် ဆော့ဖ်ဝဲ
Started by zaw latt. Last reply by မောင်နေလင်းထွန်း Apr 26, 2012. လူအများကြီးနဲ့စကားပြောလို့၇မယ့် PARTYCHAT
Started by Nandar Thiri Mar 28, 2012. ဘယ် app.folder,software ကိုမဆို run ကနေခေါ်လို့ ရအောင်လုပ်မယ်
Started by နတ်ဆိူး. Last reply by ချစ်ကိုကို Mar 18, 2012. ဓာတ်ပုံ တွေ ကို 3D လုပ်ချင်တဲ့ သူတွေ အတွက်
Started by ရဲဂျာ Jan 29, 2012. GMail ကို Backup လုပ်ကြရအောင်
Started by ရဲဂျာ. Last reply by R ပေ2Jan 6, 2012. Gmail မှာ filter ထည့်နည်း
Started by ရဲဂျာ. Last reply by ဦးမန်းဇေ Sep 30, 2011. အားလုံးကြည်ရန်
You need to beamember of MMC IT အသင်း to add comments!
Comment by MinKhine MayZon on September 28, 2012 at 3:04am သဘောကျတယ် တင်ဆက်မှုအားလုံးကိုပါ။ Comment by min naing soe on September 24, 2012 at 12:55pm HAVE A NICE DAY Comment by saithant on September 3, 2012 at 1:20pm နည်းပညာတွေမျှဝေပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Comment by သားငယ် on June 6, 2012 at 10:48pm Comment by သားငယ် on June 6, 2012 at 10:25pm photo shine software လေးများရနိင်မလာ...ကိုနေမင်းမောင်ဆိုဒ်မှာဝင်ဒေါင်းတာအဆင်မပြေဘူးဗျ..အကို ကူညီလို့ ရရင်ကူညီပါအုံး...
Comment by su lay on April 26, 2012 at 12:14pm ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Comment by myo myint on November 29, 2011 at 7:23pmayan mite ta Comment by mayzon on October 1, 2011 at 3:00pm IT နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ software အ ကြောင်း နှင့် hardware အကြောင်းကိုလည်း သိချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
thanks so much Comment by win win on September 13, 2011 at 12:51am @ snowgirl
some mails have attachments ..... and some not.
during the first step of creatingafilter, if you have clicked on check box of "Has attachment" then Gmail will only create filter for mails with attachments and for mails without attachment, it will send those mails to Inbox. Hope you get this ... :) Comment by snowgirl on September 12, 2011 at 12:22pm gmail filters မှာ mail ၀င်လာတော့ filter name ထဲကိုမ၀င်တာ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဟင်။တစ်ချို့ mail တွေဝင်ပါတယ်။ တစ်ချို့ mail ပဲမ၀င်တာပါ။ဘယ်လိုကွလဲဟင် ...ကူညီကြပါဦးနော်